Sambatra ianareo (tantarain'i raivo kamboty) - SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Sambatra ianareo (tantarain'i raivo kamboty) - SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA
Mihiboka sary kizo ihany ny tanànanay raha oharina amin’ny maha – renivohitra azy. Tanàna dobo–drano, tanàna mihoso –potaka, tanàna mihidy e !- Raha miresaka hoe ANDRAVOAHANGY aho, dia be mpahalala fa “Tanàna tsy diavin’ny olona ambony ny any aminay - Ny any amin- dry RAIVO mantsy e!
Ho anao mpizaha, ho anao liam –baovao sy tsy maintsy miserantserana ao, dia efa zatra: na nahatsikaritra, na sendra nahita anti –bavy mpandrefy lalana, mpitehin –drindrina; na mpivazavaza sy mpila kisa aman’olona eny an –tsena eny. I RAIVO iny, fa izay mantsy no anarana nomen –dReniny azy sy nifampiantsoany tamin’ny fiaraha –monina, raha nitantara tamiko ny fiainany hatramin’ny fahazaza izy.
“Zaza sary” i RAIVO, satria tsy mba nahalala izay Rainy mandrakizao, na dia efa maty aza,hono, izy izany, Sady niniana nafenina taminy rahateo moa izany , ka masa –bary maito kitoza !
Enina ambinidimampolo taona i Raivo izao, satria tamin’ny 1945, hono izy no teraka, ary tena Tambanivohitra hiringiriny, hono, izy, fa ny fitadiavana sy ny fihariam –pivelomana no nahatongavany eto IARIVO, dia izao izy valovotaka eto izao.
Efa nahalaza zavatra maro izy vao tena tapa –kevitra fa hamboraka amiko amin’ny an –tsipirihany ny fiainany manontolo. Na dia efa mandrimandry aza moa ny masony ka somary miraikidraikitra ihany ny lelany, dia toa mbola misy endrika anantenàna fa afaka hilaza ny fahamarinana ity anti –bavy ity. Nanolotra vola ahy izy, dia noraisiko tsy sazotsazoka, ary mbola nitabataba ela teo vao niteny hoe :
-	Raiso io tavoahangy io, dia hafenoy tsara ao anaty harona, mba tsy hisy hahita !
Saikatsaikatra ihany aho, satria toa maniraka ahy, toa tsy maniraka ilay tompon –trano, tsy aritro fa vaky nanontany ihany aho nony farany.
-	Inona no hovidiana ?
-	Ambilobe ihany ! Hoy izy nitsena moramora.
Efa nampakatra ny verany in –droa i RAIVO, vao tena niresaka.
-	“SAMBATRA IANAREO!”,hoy izy, “SAMBATRA IANAREO ZAZA ANKEHITRINY” raha miohatra tamin’ny fiainanay fahiny! Sady mampandihy ny masony izy amin’izany, no mikapakapa amin’ny tanany.
Niniako tsy notapahina mihitsy ny rediredin’i RAIVO! Oay ! hay moa tsy rediredy fa ny fanazavan –dRaivo e! – Ary teo... ka teo..., no nilaza tsy nanontaniana teo izy. Raha vao nangina tanteraka aho dia nanomboka ny fitantaran’ity anti –bavy, ary toy izao ny fitaterany azy.
- Io Tanàna misy an-dRenibenareo ankehitriny io no Tanànanay tamin’izany, ary io Fiangonana iangonan’ny ankizy io no Fiangonan –dRazako hatramin’izay. Ny fianarana moa dia eny amin’ilay tanàn-dehibe miorina ery avara –tanàna.Mbola misy amin’ireo Zokiko nanampy an’i Mama tamin’ny asa tany an –tsaha, ka afaka niaraka tamin’ny ankizy nianatra teny aho. Ny maraina izahay dia tsy mba manendry na dia voam –bary tokana aza fa rano no hafanaina dia misotro an’iny vao mandeha mianatra, ny atoandro indray dia singam – bomanga vitsivitsy no vantanina avy any an –tsekoly, ary ny hariva moa dia ranon –tsosoa ilaofana ranom –bomanga no ialohavan’ny fidabohana eo amin’ilay kidoro jiafotsy ladina an –tany, ao avara – patana.”
Dia niato kely i Raivo, nampidina sy nampakatra ny verany, izaho mbola tsy nahetsika teo amin’ny toerako. Nisento tokana izy vao nanohy ny tantarany , sady nanenjana hoe :
-	Izahay taloha tsy mba nanana akanjo afa –tsy iray monja , dia iny no tenaina sady entina mianjaika e! Rehefa maloto dia sasàna, rehefa rovitra dia mba hianarana manjaitra fa ny olona moa revo amin’ny asany ka tsy mivaky loha sady tsy manam –potoana holaniana amin’izany. Tongotra komavoky ny fotaka sy ny jofo no ampandriana savony, dia mba mangirana sy afa –milahatra amin’ny an’ny ankizy. Tena “SAMBATRA ho’aho ianareo ankizy ankehitriny”: manana akanjo mameno vata, mitena kiraro firy aman’olona, miaina amina tokantrano milamina sy voakarakara. Ary mandinika anao foana aho isan’andro, fa hatramin’izay nahitako anao dia tsy mivoaka an –trano ianao raha tsy fitafiana tsara pasoka, na pataloha velon –drirana. Mijery ireo palitaonao mameno trano aza aho dia variana fotsiny, fa toy ny olona manamboninahitra be na mitàna toerana ambony eo amin’ny fitondràna. Nefa dia zaza mbola mpianatra. Dia mitovy anao izao daholo ny fahitàko ny ankizy ankehitriny, toy ny olona vonona ny hianjaika lava izao; Ary tsy haiko moa na efa mora ny fiainana amin’izao fotoana izao, fa raha ny Ray aman –dReninay taloha dia tsy mba maharaka an’ireny. Izahay anie retsy mba naniry ny ho tafita tamin’izany fianarana izany e! Saingy rehefa tsy ampy tosika ny Ray aman –dReny dia nipetraka. Nitozo tamin’ny fianarana aho, fa ny anarako aza tsy dia haiko manoratra tsara akory. Ny anay koa moa ny fianarana dia ny tapak’andro maraina ihany, fa ny hariva dia fidinana eny an –tsaha , hambolena vomanga na hambolena saonjo, na avy orana, na maina andro.
Ohatry ny kofona kely izay i Raivo dia nandrora tamin’ny rindrina, ary tsy nanohy ny tantarany intsony fa nampidina ny fisotro tamin’ny verany dia toa mandefa eritreritra any alavitra any. Hatreo aloha dia tsy misy mahaliana ny tantaran’ity vavy antitra, fa toy ny efa fandre matetika ihany, toy ny fiandoham –piainan’ny ankamaroan’olona ihany , ka efa saika natory aho satria noheveriko ho mitantara angano ity antitra endrika, fa atriatry fanahy. Ny manitikitika ny lohako sy tiako hahazoana fanazavana anefa dia ity izy sady vehivavy no mahazo taona, nefa mamo tampina. Vao saika hanosoko ny fanontaniako indrindra aho, no nametraka ny verany i Raivo ary nanohy ny resany teo.
-	Hitanao ? Hoy izy. – Mba efa nanambady ihany aho taloha, nefa mbola tsy niteraka akory izahay dia maty ny vady mariaziko, ka tsy mba nanan –janaka hatramin’izay aho. Mbola misy lehilahy efatra miaraka amiko, nefa tsy vadiko akory ireo fa “SIPAKO” daholo: fanalàna vazom –boana fotsiny. Ary noho izany retsy, dia mahatsiaro tena ho diso anjara aho, na ratsy vintana angamba e ! Toa tsy misy anjara toerana hanajàna ahy intsony eto amin’ny fiaraha –monina, ka aleoko mitady izay fiononan –tsaina mba hampilamina ny fanahiko. Ka ny toaka ! Ny toaka ! Io toaka io, no namako akaiky indrindra amin’ny fiainako satria sady lovam –bady io no solon –janaka hiangoty. Tsy mijanona misotro aho raha toa ka ho izao foana ny fiainako. Tsy ditra io ! Tsy revy velively araka ny fiheveran’ny sasany azy fa “ ODY FATY”; Sady fanafody io no mpitsabo. Fa raha izay fitiavana, raha izay tambitamby dia aoka izay fa efa be ny vitako. – Fa izay lehilahy miditra eto ! (sady toa sorena izy no nanenjana ny feony)- Izay lehilahy miditra eto dia ny handany ny fananako fotsiny no tetehiny eto : manantena ny handova ahy. Fa ny ahy indray ny fananako dia tsy maintsy lany mialohan’ny hahafatesako ireo , mba tsy holovain’iza n’iza: na dia ny fianakaviana aza!
Tapaka teo ny fanazavan’ity vavy antitra, ary tsy nikasika vera sy tavoahangy intsony izy fa namonjy nidaboka teo amin’ny gorodona , dia nimenomenona irery teo : toa miantso tody ! Toa manome tsiny, toa manozona sy miteniteny foana izany. Farany aza dia lasa tany amin’ny tontolon’ny vavaka tsy marim –pototra ny rediredin’i RAIVO KAMBOTY.
Toa mitombina daholo aloha ny fanazavàny hatreto, araka ny takoritsiky ny manodidina, nefa toa tsy hitako mihitsy izay hitsiriritany ny hasambaranay ankizy ankehitriny. Sambatra izy ho’aho satria, vola ve no mahory azy? Sa sakafo no tsy ampy ao ?- hanim –pito loha isan’andro anie no ao amin’i Raivo e ! Io karazam –pialàna hetaheta rehetra io, atolony eo daholo, raha sendra mivahiny ao ianao. Ny zavatra be mpahatsikaritra fa banga fotsiny angaha dia ny hoe : “tsy dia misy fianakaviana mpamangy i Raivo!”, nefa dia mbola hiziriziriako ho hasambarany izany
Raha mbola lasa tamin’izany ahiahy izany ny saiko dia ity nisy tanora varimbariny iray nanezaka niakatra ny tohatra, namikitra mafy ary fantatro fa mitovy aretina amin’ity olona ambenako io. Tsy nisy fotoana nahafahako niarahaba azy, sady tsy dia liana ny hifandray resaka tamiko koa moa ilay ranamana, fa ny feo ratsin’i Raivo toa vara –datsaka no nanazava ity fihaonana voalohany. Vao tafakatra io dia feno korontana tao an –trano; Teo no nahitako ny tena habibian –dRaivo: Vonoana izao ! Daroka izao ! Ompa tsisy farany, teny ratsy ranolava, latsa, ozona; Izany rehetra izany no ventesiny miaraka amin’ny vazavaza tsy ifandrenesana. Tao anatin’izay fifamaliana izay no nahalalako fa iny no vadiny. Oay ! Sipany mantsy fa tsy vadiny e ! Satria iray amin’izy efa –dahy.
Fanina aho, jenjina noho ny zavatra tsy nampoiziko hiseho, ka tsy nisy reko afa –tsy ny fara –tenin’ilay vavy antitra.
-	Mandehàna r’ity fa izaho tsy mitambitamby lehilahy a !
Dia lasa dila teo imasoko iny vahiny niserana iny. I Raivo anefa tsy mbola nangina fa nipenipenina eran’ny trano: nitanisanisa ireo vakana tao anaty tavoahangy nampirininy izy, dia namafifafy rano eran’ny trano, dia alainy indray ny kifafa ka afatony eo am –baravarany. Nony vitany ny fombafombany, dia nankeo an –dohafandrinany izy ary naka BAIBOLY iray, fa roa moa no mpipetraka eo, dia iny no nilokalokany sy nololohaviny eran’ny trano, fa tsy hanambady intsony, hono, izy mandra –pahafatiny, ary tsy hanao sipa intsony koa angamba araka ny famaritany.
Resy lahatra teo tokoa aho , fa “SAMBATRA IANAREO” voalazan –dRaivo kamboty, dia ireo sokajin’olona ambony fari –piainana sy manana ny ampy, nahafitaka azy. SAMBATRA tokoa izay tsy miaina ny fiainan –dRaivo, ary tsy tratry ny aretina mpahazo azy, fa hay tena mafy tokoa ny manjo ity vehivavy mivajijitry ny adin –tsaina sy ny adim –piainany ity. Toa sambatra koa aho fa tsy sahala amin –dRaivo mamo lava sy mpiteny ratsy, na mpila kisa aman’olona. Sambatra aho fa tsy mijaly noho izy, toa tsy mivavaka, tsy mahalala an’Andriamanitra, fa mbola mitompo amin –tsampy
Ny fisarahanay no tena nahatsapàko ny HASAMBARAKO satria, izaho moa afaka nandeha namonjy ny fandriako, fa i RAIVO KAMBOTY, dia teo no naharaina andro: teo ambony gorodona teo.
Dila andro vitsivitsy iny teo iny, dia nifamotoana tsy nahy indray ny tafanay sy i RAIVO KAMBOTY. Vavy antitra nofosana sy bikàna ihany no manatrika eo imasoko, toy ny tamin’ny farany : sambatsambatra ara –panesoana, miraikidraiki –piteny, mievaeva fijoro. I Raivo io, izy sy ny tambaviny indrindra no niombon –kalo eo amin’ilay takariva mahatsara vahiny.
Mandrimandry eo am –pandriany eo izy, dia miarina tsindraindray, mampidina sy mampakatra ny verany, na dia efa somary nahazo kely ihany aza.
Tsy fantatra moa na fanararaotana , na sendra fifandrifian –javatra, fa dia nirongatra mihitsy tato ho ato ny hala –baoty tao an – tranon’ity vavy antitra sy nahazo taona ity: “tsy hita, hono, ny vola nasisika tao anaty kidoro, very koa ilay radio kely tetsy an –doha rindrina, nisy nitondra ny pataloha mpipetraka tetsy an –tongo –pandriana. Ary hatramin’ny akoho nitarika , navoaka hitsindroka aza no tsy tafaverina an –trano intsony; manginy fotsiny ny vadin – dRaivo mpanao hakisitrika. Hay moa sipany e!”. Dia tondraka teo aminy ny alahelo rehetra ka indro fa tra - drano Anosy i Raivo Kamboty. Ary dia izany no toloha be nampirehoka ny omby: ompa ve ? Teny ratsy ? – Tsy mba adinon –dRaivo ireny amin ‘ny fotoana mahafeno ny kapoakany tahaka izao.
-	Ialao nenina ihany aloha fa sao adinodino na sendra diso toerana Raivo a ! Hoy aho nampitony ny fisafoakany.
-	Tsia Pasitera a! Fa i PASITERAKELY mantsy no nanavanana azy amin’ny fiantsoana ahy na dia mbola tsy voahosotra ho Mpitandrina aza aho hatramin’izao.
-	Tsy izany mihitsy ! hoy izy nanohy ny teniny, fa ny tanàna mihitsy no efa misy ratsy. Aiza ve ka hatramin’ny fanaka ato an –trano avy no atao lasibatra e!? – Tena Mpamosavy malemy anie izany e !
-	Ary misy olona ahiahianao ve anefa amin’ireo olona mpifamezivezy aminao ireo ?
-	Ka ho angatra indray àry ve sa lolo no nadroba tato ? no tsy ho ireo ?
-	Nandroba ? Hoy aho hendratra dia hendratra. – Nandroba ka tsy niantso vonjy ianao?
-	Hiantso vonjy amin’iza moa ? Amin’ny rindrina ?
-	Fa tsy miara –monina amin’olona angaha ianao no hiantso rindrina ? Hoy aho nanatsafa ny hatezeran –dRaivo.
-	Raha izay ny eto Andravoahangy indray retsy dia samy mandeha samy mitady a! Raha mifanedaka an –katerena aza, mila hifampidaroka.
Tankina aho ! I Raivo moa tsy nanohy ny resany intsony fa nampidina sy nampakatra ny verany dia nitsirika kely teo am –bava tohatra, ary namonjy nidaboka teo ambony gorodona : tsisy tsihy ! Tsisy lafika !
Izaho kosa nitsakotsako ity fomba fiheverany ny antsoiny hoe : “ANDRAVOAHANGY“. Toa mila handresy lahatra ny fandinik’ity vavy antitra. Efa impiry tokoa aho moa no nifanerasera amin’ny mponin’io faritra io, fa dia samy masina an –taniny fotsiny. Izay endrika mifanehitra aminao , toa olona vonon –kiavona daholo, izay varavarana mifampitodika, toa mifampitaratra sy mifandanja hery. Sendra vehivavy lehibe iray aho indray maka, dia mba noharahabaiko; Kanjo namaly ihany izy, fa toa any an’orony no miteny, sady tsikaritra amin’ny endriny eto ivelany fa tsy faly izy.
Teo vao lasa ny saiko, ary azon’ahiahy maro ny fieritreretako. Sao dia sanatria kosa àry ho’aho, ny fifaneraserako amin’i Raivo no misarika ireto manodidina ho hafahafa sy toa leo ahy. Matetika mantsy i Raivo no mila kisa sy mitomany vaniny amin’izy ireo, dia mampakapakatra sy mamoaka izao teny tsy mendrika rehetra izao. I Raivo koa, noho izy manana ny ilainy dia zatra tenin –karena ka toa manontany ny ory isan’andro. Fa raha izany, olona iza kosa moa no hadio fijery amin’izay KARILAHY OMPIN –DRAIVO ?
Amin’ny antony hafa koa anefa, dia toa maha –te –hitsikera ny fiveloman –dRaivo ny ankamantatr’ireto olona mahalala azy fa misy zava –maizina tsy faneho masoandro mantsy maharevo azy ao, ka manahy aho fa tsy noho izy RAIVO KAMBOTY no mampihatakataka ny olona amiko fa noho izy “RAIVO MPANOTA”.
Voavaly ny momba ny olan’io fiaraha –mionina io, fa nihiaka tampoka i Raivo, ka nahataitra ahy, ary nisarika ny masoka hitsiriaka tany amin’ny ny feom –bilia nakorontany sy ny vely sotrobe eran’ny trano.
-	Fa izy indray ! Hoy i RAIVO nanenjana ny feony. – Hitady izy ka hitady ! Hihary koa ka hihary , ary hanody azy mandrakizay ny alaheloko, fa raha mbola mitahy ny razana, ka mbola mijery ny tany masina, dia tsy maintsy hisy valiny izao.
Dia ohatry ny niato kely ny fahatezerany ary nadrorarora teo amin’ny gorodona izy, sady nanopy ny masony teo amin’ireo Baiboly roa mpipetraka eo an –doha fandriana ka nanadratra tamin’alahelo ny kafarafara sy ny fiantsoana tody, izay faritany hoe: “Vavaka”.
-	Eny, Andriamanitra ô! Ianao Jesosy Kristy, Hitanao izao toerana misy ahy izao, hitanao fa very daholo ny fananako, ka izay naka azy, toara tsy tafarina mandrakizay! Ary izay mitady hibahana na manao ratsy eto, dia aza vanona izy ! Fa izaho kosa ! mamelà y heloka fa tsy mendrika ilay toerana, hatramin’izao ka ho mandrakizay: Amen !
Rehefa vitan –dRaivo ny endri –bavaka tahaka itony dia minia tsy mamoaka feo mihitsy izy, fa mamonjy fandriana, dia mody miesona.
Teo no nahalasa saina ahy.Tena maizina tanteraka amin’ity hazo amoron –tevana mantsy ny antsoina hoe : foto –pinoana Kristianina, raha zohiana ny resany. Mbola manjavozavo aminy ny manavaka izay handefasany ny vavaka ataony, ary tsy hainy hoe : amin’ny anaran’iza no hanolorany azy. Tsy azo lazaina hoe tsy nobeazina tamina fivavahana i Raivo, satria mahay mivavaka amin’ny vakana aman –drano, amin’ny vola aman –kifafa, ary mahay mivavaka amin’ny razana sy ny tany masina. Efa vavaka ireny , saingy fanompoana Andriamanin –kafa; raha lazaina ho tsy Kristianina koa anefa izy, toa mahay mifona sy miaiky heloka ihany. Tsy hita mihitsy izay ilazàna azy e !
Te –handalina ny finoana ananan –dRaivo aho, ka voatery nanantsafa azy.
-	Fa aiza moa ny Fiangonanareo eto Iarivo, raha tsy mahadiso ? Hoy aho nanonona tsy sazoka , kanjo mba novaliany ihany.
-	Teny Ankorondrano aho no nivavaka taloha, ary izaho mihitsy anie no nitarika an –dry Ianona sy Ianona nivavaka tany e !- Fa kamo aho tato aoriana, dia ny fiainako fotsiny no ataoko metimety!
-	Ka tsy hafahafa be ve izany fiainana tsy mivavaka izany ? – Hoy aho nampandotso an –dRaivo.
-	Ny fanahy fotsiny ry Inona no atao tsara a! Dia mbà hendry !
Nomboka nivatravatra firesaka ity vavy antitra, ka takonako tsy ho fantatrao ny fiheverany ny hasin’izany fivavahana izany, saigy ny fara –teniny no ilaina tsindriana, mba hanazava zavatra maro.
-	« SAMBATRA IANAREO !», hoy izy, - sambatra ianareo ankizy ankehitriny, fa tsy mba be asa ohatra anay taloha. Fa izahay anie taloha ka nijaly e ! Tsisy tany nitombenana mihitsy. Ny anareo ka isaky ny mihetsika dia mivavaka ! Isaky ny mihodina dia mivavaka.
Dia nihenjana kely ny feon –dRaivo, toa mitory fa tezitra izy, no sady nanezaka hoe :
-	Ny fivavahana izany ho’aho , tsy mahavita n’inona n’inona, tsy mahavelona izany fa ny mankao am –bava no zava –dehibe.
Tsy nisy veloma, tsy nisy alaharo fa tonga dia nilaozako i Raivo, satria nandrovitra ny ati –fanahiko. Rehefa sendra sakaiza manody moa, dia fomba ny miova fitàna, ary tojo ny vatravatran –dRaivo ny tsiro nianohana, ka fandìka ny lambanana.
SAMBATRA IANAREO, tsy sendra an –dRAIVO KAMBOTY tamin’izay ora izay, SAMBATRA IANAREO, fa izaho saika latsaka tamin’ny fahotana, nankahala azy. Fa nony farany vao tsapako fa TENA SAMBATRA AHO, satria afaka nandositra , niala ny tsy fahalalàny, ny sain –jambany: fa i RAIVO KAMBOTY, dia teo no niziriziry : teo am –bava tohatra teo.
Sokajy : Fiaraha-monina
Laaris (12/07/2012 06:22:04)
tokny notenennao Raivo hoe:raha n razana no mitahy enao kamboty no sambatra indrindra.mba asivo andravoahangy 2012 ndray e!d aza atao RAIVO TSONY.
Daty : 17/07/2004
Mpamangy : 3447